Seynisyahanno Afrika ka helay faraca dad ka duwan bani'aadanka caadiga ah - BBC News Somali
Seynisyahanno Afrika ka helay faraca dad ka duwan bani'aadanka caadiga ah
14 Febraayo 2020
Lahaanshaha sawirka De Agostini
Image caption It's believed they split from the shared ancestor of Neanderthals (pictured), Denisovans and modern humans
"Qowmiyad bani'aadanka caadiga ah ka duwan" oo aan la garaneynin oo ku noolaa Galbeedka qaaradda Afrika qiyaastii 500,000 oo sano ka hor ayaa loo maleynayaa inay faracooda wali ku dhex nool yihiin dadka maanta jira, sida ay seynisyahanno sheegeen.
Cilmi baareyaasha ayaa sheegay in natiijada dhacaanka hidasidaha ee DNA-da oo ay ka qaadeen qalfoof madax ah ay muujisay in faraca dadkaas ay ilaa hadda bulshada galbeedka Afrika ka yihiin 2% ilaa 19%.
Si gaar ah waxay u heleen farac la xiriira dadka loo yaqaanno Mende oo ku nool waddanka Sierra Leone iyo dadka kale ee la kala yiraahdo Yoruba iyo Esan oo iyagana ku nool waddanka Nigeria. Waxaa kale oo ay sheegeen seynisyahannadu inay cilmibaaristooda ku heleen dad ku nool qeybaha galbeed ee waddanka Gambia.
Qowmiyaddan lagu tilmaamay "kuwo ka duwan abuurka bani'aadanka caadiga ah" ayey awoowayaashood meelo kala duwan aadeen qiyaastii 800,000 oo sano ka hor, sida lagu daabacay majalladda New Scientist.
Sriram Sankararaman - oo horkacayay cilmibaaristan lagu sameeyay Jaamacadda California ee magaalada Los Angeles - ayaa BBC-da u sheegay inuu aaminsan yahay in dad kale oo noocyadaas ah la heli doono mustaqbalka.
"Inta aan xogaha noocan ah ka heleyno, horumarkana kasii sameyneyno waxaan la kulmi doonnaa macluumaadka ku saabsan qowmiyadaha ka duwan bani'aadanka caadiga ah", ayuu yiri.
"Qalfoof ay saynisyahannadu sheegeen inuu aadamuhu ka soo farcamay oo la halay"
Madxaf 200 oo sano jiray oo Brazil ku gubtay
Lahaanshaha sawirka CMNH/MATTCROW
Image caption Midig: Qalfoofka la halay oo dhanka bidix laga dhigay male awaal farshaxan oo muujinaya sida Anamensis u ekaayeen
Bishii August ee sanadkii lasoo dhaafay, Cilmi baadheyaal ayaa Itoobiya ka helay qalfoof madax dad oo aan wax badani ka maqnayn oo u eeg noole daayeer oo saynisyahannadu ku doodayaan in aadamuhu ka soo tafiirmeen.
Baadhitaanka qalfoonkan la helay wuxu dood gelinayaa aragtiyo laga qabay sida aadamihii hore uga tafiirmeen noolaha daayeerka u ekaa, sida ay seynisyahannada helay ay sheegayaan.
Aragtida haatan la qabo ee ah in daayeer qalfoofkiisa loo bixiyey Lucy uu ka mid ahaa noocyadii aadamihii hore ka farcameen, ayay suurto gal tahay in dib loogu noqdo.
Warka qalfoonkan la helay waxa baahisay majallada Journal Nature.
Qalfoofkaa madaxa ah waxaa meel la yidhaa Miro Dora oo ku taal degmada Mille ee gobolka Canfarta ka helay, borofesoor Yohannes Haile-Selassie.